Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitondrana HVM: Mitohy hatrany ny fandikan-dalàna
Fitondrana HVM: Mitohy hatrany ny fandikan-dalàna
Tsy misy fitsaharany intsony fa dia sesilany tato ho ato ny fanitsakitsahana lalàna ataon’ny fitondran-dRajaonarimampianina Hery. Tsy tahotra tsy henatra intsony izy ireo mandika lalàna rehefa hiaro ny tombotsoany na koa hamotika ireo mpifanandrina ara-pôlitika aminy. Raha tsiahivina dia vao tamin’ny herinandro lasa teo no nandika lalàna ny fitondram-panjakana tamin’ny fandravana ireo trano fivarotana hani-masaka etsy amin’ny zaridainan’Anosy, dia fandikan-dalàna mibaribary indray no nataon’izy ireo, omaly. Tonga teny Ankorondrano, eny amin’ilay toerana antsoina hoe “Romanor” ny sekretera jeneralin’ny M2PATE, ny kolonely Joseph Ramiaramanana, niaraka tamin’ny mpitandro filaminana maromaro avy amin’ny Emmo-sécurité. Anton-dian’izy ireo teny an-toerana ny handrava ity trano antsoina hoe “Romanor” ity satria efa an’ny fanjakana hono ny tany ka tsy maintsy ravana ny trano. Mazava ho azy fa niaraka tamin’ny vaditany ingahy Joseph Ramiaramanana ary nitondra didim-pitondrana na “arrêté ministeriel” izay manome alàlana ny fandravana io trano io. Tsara ihany angamba ny mampahatsiahy fa tany manan-tompo ity tany etsy Ankorondrano ity izay mitondra ny anarana hoe Jean Marie Rakotomanana. Taona vitsy lasa izay dia saika nalain’ny fanjakana ny tany saingy tsy nanaiky izany ny tompony ka nametraka fitoriana any amin’ny filankevi-panjakana (Conseil d’Etat). Tao aorian’izay dia namoaka ny didiny ny filankevi-panjakana ka nivoaka mpandresy ingahy Jean Marie Rakotomananana tompon-tany. Inona indray anefa ny zava-niseho omaly dia tonga niaraka tamin’ny vaditany sy didim-pitondrana ny sekretera jeneralin’ny M2PATE ary nandrava ny trano. Mibaribary toy ny vay an-kandrina ny fandikan-dalàna ataon’ny fitondram-panjakana satria hatramin’izay nisian’ity firenena ity dia tsy mahafoana ny didy avoakan’ny filankevi-panjakana ny didim-pitondrana (arrêté ministériel). Tao anatin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao vao nahitàna izany tranga izany teto Madagasikara ary manaporofo hatrany fa fitondrana tompon-daka amin’ny fandikan-dalàna no misy eto amintsika, amin’izao fotoana izao. Tsara marihana fa nisy tany aloha tany ny fifanarahana nataon’ny tompon-tany, Jean Marie Rakotomanana, sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana momba ity toerana ity. Tsy midika anefa izany fa fananan’i Marc Ravalomanana manontolo io tany etsy Ankorondrano io raha ny fanazavana nomen’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny seraseran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra
Fanjakana Hery R: Manao izay hananana fahavalo ny mpiasam-panjakana
Asa izay hevitr’ingahy Hery Rajaonarimampianina filohampirenena amin’ny fijaliana mahazo ny mpiasam-panjakana amin’izay fotoana izao. Maro no mitaraina amin’izao fotoana izao fa efa ho iray taona izao no nomena ny didim-pitondrana izay nahazoany fisondrotana kilasy na fisondrotana sokajy, nefa tsy aloan’ny ministeran’ny Vola izany. Hatramin’ny volana janoary 2017 no nomena izany didim-panjakana izany ny mpiasam-panjakana maro nefa nampiesonina fotsiny izao. Ny taratasy no navoaka fa ny vola amin’izany tsy omena. Raha tonga any amin’ny mpikarakara ny karama ireny ny mpiasam-panjakana ireto dia valy boraingina no ataon’ny mpikarakara ny vola hoe “manontania an’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny minisitra ny Vola fa izy no tsy mamela ny handoavana izany”. Dia gaga ihany ny rehetra amin’izany. Mahandrasa, mahandrasa, izany no avalin’ny sampan-draharaha mikarakara ny volam-panjakana raha tonga any amin’ny biraony hianao. Ny tena olana aza dia efa maro koa no lasa misotro ronono ireny mpiasam-panjakana ireny ka tsy afaka manaraka izany intsony. Tsy azo ampidirina ao anatin’io taratasy fikarakarana ny fisotroan-dronono io nefa ilay didim-panjakana izay azo satria mbola tsy voaloa ny vola. Rehefa lasa ilay mpiasa mamonjy ny tanàna hodiany dia very anjevony ny raharaha. Tamin’ny andron’izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao no voalazan’ny mpikarakaraka vola ao amin’ny ministeran’ny Vola no nisian’ny olana be toa izao. Milaza izy ireo mpanatanteraka ny baiko fotsiny ihany ka maniraka ny olona hanontany any amin’ny lehibe raha te-hahazo fanampim-panazavana bebe kokoa amin’izany.
Tsy izany ihany no fampijaliana ataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ny mpiasam-panjakana fa ny fanapahana karama tsy amin’antony. Nanomboka ny volana desambra 2017 izany ary mitohy hatramin’ny volana febroary 2018 izao. Mbola misy an’arivony ny mpiasam-panjakana tsy mandray karama amin’izao fotoana izao.
Tsy ireo ihany fa tsy raharahian’ny fanjakana intsony ny fitakian’ny sendikan’ny mpiasam-panjakana isan-tsokajiny izay mitaky ny fanatsarana ny fiainan’ny mpiasam-panjakana.
Hatramin’ny fisondrota-karama 10% isan-taona izay ialana amin’ny vesatra ny fidangan’ny vidim-piainanana dia nofoanan’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny fanjakan HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) avokoa.
Famonoana olona sy fampijaliana ny mpiasam-panjakana tanteraka no ataon’ity fanjakana ity hoy ny resaka ataon’ny mpiasam-panjakana isaka ny birao any amin’ny teoeram-piasana isan-karazany any. Malilo ny sofina maheno ny fitarainan’izy ireo fa toa ny mpanao gazety indray no heverin’izy ireo hamaha ny olana amin’izany angaha.
Ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina moa tsy milaza ny mangarahara marina amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena. Asa na miandry ny vahoaka hitroatra izy ireo vao hanambara ny antony tsy ilazany ny marina amin’ny tsy fandoavany ny fisondrotan-karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny tambin-karama maro izay tsy aloany ireo ? Moa ve tsy manao izay hananana fahavalo ny mpiasam-panjakana ity fanjakana Hery Rajaonarimampianina ity?